Kungani osanda kuzalwa akusho ukulala?
Inkinga yokuqala ezibhekene nabazali abasha ukuthi zezinsana zabo akozeli isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka bangathanda. Akukhona ukuthi ingane akusho uvale amehlo akhe wayengenakukwazi kancane elele, kodwa uvuka kaningi kakhulu. Ikakhulukazi, yebo, ukhathazekile umama, kungani osanda kuzalwa akusho ukulala ebusuku okungenani amahora angu-5-6.
Iqiniso lokuthi iphupho ingane lithembela ngokuphelele imizwelo yakhe, ubuntu, ezempilo, kanti isikhathi sihlale siphapheme nsuku zonke. It kubhekwa njengento evamile uma ingqikithi ingane kuze kube engu-amasonto amathathu, elele amahora angu-18 ngosuku, bese, ukuba izinyanga ezintathu ubudala - amahora angaba ngu-15.
Idala nengqinamba yokuthi ingane ingavumi ukuhlukanisa cishe imini nobusuku. Ngakho-ke, uma ingane zonke 3 - 4 amahora uvuka ebusuku efuna ukuphiwa ukudla izingubo, ukuthi akufanele sikhathazeke abazali. Kodwa kufanele kancane kancane accustom ingane yokuthi akufanele sihlale siphapheme ebusuku eside. Kule ndaba, akudingekile ebusuku ukufaka ukukhanya okukhulu, ukukhuluma ingane ukudlala. Abazali kufanele azame ukunciphisa ebusuku ingxoxo umntwana ubuncane - kuphela izinqubo ezidingekayo.
Okubi nakakhulu, uma usana okungahambisani alale ngisho elandelanayo 3 amahora. Lona "insimbi" omama: mhlawumbe ingane iyagula, noma sintula ukudla! Kuyadingeka ukuba bahlole ukuthi imvuthuluka odla kuyilapho zidla. Ukuze wenze lokhu, umntwana kufanele kuhlaziywe ngaphambi yokudla, bese - emva. Kwesisindo kufanele zifane izinga ukudla okwesikhathi esithile yobudala umntwana.
Uma ingane ithola ukudla okwanele, njengoba Nokho kufakazelwa izilinganiso isisindo, kanye nosana akusho ukulala, amahora angu-3 zilandelana, kufanele sinake lokhu isivakashi wezempilo noma udokotela. Kungenzeka ukuthi ingane colicky.
Ngokuvamile kwenzeka ezinganeni ku yokudla yokufakelwa noma ngesikhathi kuhlanganiswa ku ekudleni kwakhe izicupho. Uma umama encelisa ingane, kufanele uqaphe kakhulu ngokudla kwabo. Iklabishi beet unekhono uphumule amathumbu, amanzi acwebile futhi amagilebhisi kungaba lwezithelo olubangela ukubila kule ipheshana wokugaya ukudla. ukusetshenziswa okweqile apula futhi kubabangele ubuhlungu emathunjini ingane.
Ngezinye izikhathi zesilumo ngakho ngomntwana, ukuthi usana akusho ukulala emini futhi. Futhi umama like ithobela Ukudla kudingekile nokondla ingane akusho usathola, kodwa namanje ukhathazeke njalo obakhathalelayo. Ngokuvamile lokhu kungenxa ekukhiqizeni igesi anda.
Kufanele lusize imvuthu. Ukuze wenze lokhu Pharmacy ukuthengisa imikhiqizo ekhethekile equkethe isitshalo ezikhishwe. I powder is nje ukungezwa ku vodichku nengane waphuzisa. Kodwa ungenza yezokwelapha futhi baphuze bebodwa. Inikeza indawo enhle kakhulu kusho dill imbewu zaparivayut amanzi abilayo. Lokhu decoction of amaconsi ambalwa bese uyifaka kuzo amanzi.
Futhi, ukunaka ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe esihlalweni kwengane. Kuyinsakavukela kuyinto esihlalweni izikhathi eyodwa kuya kweziyisithupha ngosuku. Uma umntwana usuke engakabi uyalulama okungenani kanye ngosuku, lokhu ukuhlukumeza. Kungenzeka ukuthi leli qiniso iyimbangela ukuthi usana akozeli.
Kunezindlela eziningana indlela kujwayeleke lokhu ingane ohlelweni. enemas Nokho eziwubala izingcezu insipho, ayifake le ingquza, akufanele wathumba. Lezi zindlela ziyalutha, okubangela kasoze ukujwayela ukwenza ngokwakho.
Yiqiniso, uma esihlalweni ingane njalo kanzima, kufanele uxhumane nodokotela waze wabhala ube yinhlansi ekhethekile. Kodwa uma esihlalweni elithambile, kodwa usana ayikwazi ukuhamba, omama abaningi wasebenzisa inqubo "ipayipi ububi ngentukuthelo." Lokhu kudinga pipette neqembu lomculo iraba isuswe - okungukuthi, ngamapayipi ingilazi. Nge ukuphela obukhulu ke okumelwe ingaphazamiseki futhi ibe mahhala okuseceleni okubukhali. Its nivame ngovaselina noma amafutha yemifino, nokuvusa ngamadolo ukuze umlenze umntwana esiswini yethulwa ngokucophelela singene emanzini ididi 1 -. 1.5 cm Ngaphakathi pipette akufanele unganakwa, Nokho abadala kufanele okwamanje sibaqaphelisise.
Amagesi uzoqala ngesikhathi esifanayo ezingeni imfucuza, futhi uzovela kwesihlalo ngaphakathi tube. Ngokushesha kufanele zisuswe ukuze umntwana, ekugcineni besusa nomunyu. Uma lokhu kungenzeki, ungakwazi ugovuze legonechko tube, inkanuko sphincter. Lokhu kumele kwenziwe ekuseni ngesikhathi esisodwa futhi ngesikhathi esifanayo. Kancane kancane, umzimba Ufika esetshenziswa, futhi kuphela abadala isikhathi imvuthu unswathe, kuyoba ngokushesha zuku bebodwa. Uma uzilungiselele kusenesikhathi isebenzisa le nqubo, isib, podstelit iphepha amathawula, kungenzeka sokusindisa abantu nasenkathazweni ukugeza singcoliswe namanabukeni.
Uma abazali Ukulalelisisa kakhulu izingane zabo, ngeke kube nzima ukuqagela ukuthi kwenza imvuthu ukungakhululeki, bese uyazama ukuletha ingane kusukela lezi zici.
Indlela bancelise futhi ukuyengela? Futhi lapho ukuqala?
Indlela anakekele intombazane esanda kwenziwa. Izici eziyinhloko kwenhlanzeko
Gymnastics enganeni (izinyanga 3): izincomo
Kuthiwani uma ingane ingavumi scat 3 suku?
Flashing beacons imoto: umbala nokufaka
Indlela yokwenza ukukhiqizwa inzuzo? Izimpendulo zingatholakala kulesi sihloko
Lokusungula Wezingane: yezandla aphume iphepha ezinemibala amakhadibhodi
Esithandweni Iziko kanye nekubaluleka kwalo ekukhiqizeni steel
Izidakamizwa "Monural". Buyekeza, incazelo, intengo
Pet izinyoka: izinhlobo. Ukunakekelwa nokulungiswa
Apple Tree "ligol": incazelo ezihlukahlukene, izithombe